IiCeles Zishukuma Zonke Le Ndlela yeMilo yeTaka-Amehlo
Toke Makinwa Kunye nezinye iiCeles Zonke Zingcangcazela Le Ngxangxasi Yekati
IVeki yeFashoni ye-ARISE I-2018: Ubugcisa obunxitywayo NguMbulelo weFad omtsha kwiNgqokelela ye "Ixesha" likaGozel Green
Tyena ikati-iliso imisesane imfihlakalo kuphela kwabo bahlala phantsi kwelitye njengoko abathandi bokwenene befashoni bayazi ukuba le ndlela iphefumlelweyo ye-vintage iye yazibeka emephini kwakhona. Khumbula intetho "okuza kwajikelele kubuya kwajikelele?" Ewe oku kunokunxulunyaniswa nento eyenzeka kuthi millennials kuba siqala ukuphinda sibuyele umva xa kuziwa kwifashoni.
Umkhwa wekati yemilambo yamehlo uye waba mkhulu kangangokuba abantu abaninzi abadumileyo babonwa bezinxibile noBeyonce bathanda ukujongeka okutsha ngamatyeli aliqela.
UKumkanikazi B wabonwa enxibe ihlobo lebhokisi yezipili kwisibhamlo seGrammy kwangoko kulo nyaka. Nangona le meko ibikho vogue ukusukela ngonyaka ophelileyo, ibambe umlilo xa i-superstar yayinxiba. Abanye abantu abadumileyo kunye neeblogi bakwenze bajonga nokukhanya kwelanga kubandakanywa nabo Toke Makinwa, UBonang Matheba kwaye UStephanie Coker, bonke abaqhelekileyo bakhanyise ukukhanya kulo naluphi na uhlobo olufanele ukulandela.
Jonga ukuba i-celebs kunye nee blogger ziye zatyhoboza njani kwiiglasi zeVesti yeKati ye-Vint…
Beyonce iisheyiphu zebintage Charity Baaitse clan Imfashini ejikeleze kwihlabathi Imfashini ye-Nigeria Iimpawu zamehlo zangoku Iindlela ezintsha zeFashoni Iindlela zakutshanje zefashoni eNigeria Iindlela zakutsha nje zefashoni msmanche UStephanie Coker I-Thoniabankz Toke Makinwa
UJessica Agorye Aprili 6, 2018